IFTIINKACUSUB.COM: Saamiga 19% Itopiya laga siiyay Dekedda Berbera ha lasoo dhaweeyo.
Saamiga 19% Itopiya laga siiyay Dekedda Berbera ha lasoo dhaweeyo.
Iftiinkacusub.com: Waxaa baryahan muran iyo hadalo aan loo meel dayin ay kasoo baxayeen, dadyaw kala gadisan ,oo iyagu ku jaha wareeray hawshii Dekeda Berbera ,taasi oo aan u arkaayay in aanay si cadaalad ah wax u eegayn.
Inkastoo arintan aanay si toos ah uga hadal madaxda Xisbiyada Mucaaradka ah,balse hadana waxyabaha aadka muranka u dhaliyay ayaa waxa ka mid ahaa saamiga dalka Itopiya laga siiyay Dekeda Berbera kaasi oo dhan 19%.
Anigu ma rabo in aan ka hadlo qiimaha samiiga Itopiya la siiyay in uu yahay mid ku badan ama kuyar, taas waxa aan u daynayaa hawl wadeenada gacanta ku haya oo midkasta oo inaga ah uga aqoon badan.
Horta asal ahaan qaabka uu saamiga Dekedu u qaybsamaa waxa uu yahay sidan: shirkada DP World waxa ay leedahay saami dhan 65% halka ay Somaliland ay leedahay saami dhan 35% ,taasi waxa ay ku tusinaysaa in labadii saami ee sharciga ahaa ay yihiin kuwaasi kor ku xusan.
Hadaba maxaa keenay in labada daraf ee DP iyo Somaliland ay Itopiya u jaraan ,saami dhan 19% ,halkeese ayuu ka imanayaa qiimahaasi ama ya siinaaya?
Su'aasha kale ee iswaydiinta lehi waxa ay tahay ,waa maxay sababta Itopiya loo siiyay saamigaasi dhan 19% maxay ayayse ku kasbatay.
Dad badan ayaa arimahan ku jaha wareeray,qaarka mida ayaa waxa ay leeyihiin,Itopiya ayaa Dekadii qaadatay,taasina waa aqoondarada ay u leeyhiin qaabka samiyada iyo shaqooyinka noocan ahi ay u socdaan.
Haddii aynu ka jawaabno sababta dawlada Itopiya loo siiyay saamigaasi dhan 19% iyo waxa uu yahay,waxa aynu ku macnayn karnaa, in aynu horta iswaydiino su'aal ah, Dekeda Berbera cidda la raba in ay ganacsigeeda kala soo degtaa ama ay suuq u noqotaa horta wa-ayo?Yaase dabooli kara dhaqalaha intaasi leeg ee maanta la galinaayo dekeda Berbera.
Itopiya xaq miyaad ugu leedahay in aad tidhaahdo,""Itopiyaay wanakaa Dekedii dhisnay ee waa in aad wax kala soo degtaa"",taas cid ku khasbi kartaa ma jirto,waxa ay haysataa Jabuuti.Hadaba adiga ayay waajib kugu tahay in aad Itopiya lafteeda maslaxato,xeeladaysato,soo jiidato,maslaxadaasi waxa ay noqon kartaa mid aad dhaqaale iyo saami ku siinayso sheerka Dekeda ,si ay u aragto Itopiya in ay dekeda wax ku leedahay.
Su'aal kale ayaa iswaydiinleh taasi oo ah,dawlada Imaraadka ee dekeda maalgalinaysaa,dekedda Berbera miyay iska caashaqday ama ay iska jeclaatay calashaan Ilahay dartii , mise waa ay aragtay in dekadani ay suuq wayn ka heli karto dalwaynaha Itoobiya.
Somaliland waxaa ku nool dad dhan qiyaas ahaan Afar Milyan oo qof,suura gal ma tahay in dekeda dhaqalaha intaasi leeg la galinaayo ay awoodi karto in ay buuxiso kaligeedna ay ku filaato;taasi waa maya awoodna uma laha.
Hadii ay sidaasi tahay ,caqli iyo garaad caafimaad qabana aynu ku fikirno,waxa markaaba inoosoo baxaysa in dekeda Berbera sababta u wayn ee loo balaadhinayaa,maalka intaasi leegna loo galinayaa, uu yahay si loo kasbado ganacsatada iyo dawlada Itoopiya,iyaguna ay wax kala so degaan Dekeda Berbera.
Hadaba hadii aadan dalwaynaha Itopiya aadan soo jiidan,tartan iyo dadaalna aadan kula galin dekeda Jabuuti ee ay isticmalaan,halkee Dekeda Berbera suuq looga doonayaa?
Haddii aan si kale arinta u dhigo,shirkadaha waawayn ee dunida ka ganacsadaa,waxa aynu og nahay in ay ganacsigooda ku hirgaliyaan in ay marka hore soo sahamiyaan wadamo ay isleyhiin waxa aad ka heli-kartaan dhaqale aad u badan,shirkadina Kayn/Duur cidla ah, oo lama degaan ah ,kama samayso wax aan dani ugu jirin.
Sidaa awadeed ,bal kaba soo qaad sida dadka qaar ku doodaan ,hadiiba aynu Itopiya waxbaba siin wayno!iskana diidno in aynu Itopiya wax saami ah siino ,santina Allah ha ka yeelee ,Berbera iyo dekedeeda halkee ayaa suuq looga keenayaa,yaasa buuxin kara awooda intaasi leeg ee ay dekadu u baahan tahay,halkeese Somaliland looga keenayaa dhaqalahii ay kula heshiisay in ay kiro ahaan u bixiso shirkada DP.
Dalka Jabuuti waa dal aad u yar,hadana dhaqalaha uu ku nool yahay waa kan dekedda ay ka helaan.Jabuuti si ay Itopiya usoo jiidato waxa ay Itopiya la gashay heshiisyo aynaan inagu culayskooda qaadi karin,waxa ay dhistay deked ka gooni ah mida ay wax kasoo dejiso,waxa ay ku maal galisay malaayin Doolar,ka waran hadii Jabuti ay Itopiya erido,macne intee leeg ayay dekeda Jabuuti samaynaysaa,saw noqon mayso ka guuraa.
Hadii aynu macnayno saamiga Itopiya la siiyay maaha ma guurto,waa samiga sheerka ee labada dhinac,tusaale ahaan shirkada DP waxa ay Itopiya siisay saami dhan 14%,samigaasi iyada ayaa xaq u leh ,inaguna in aynu ku faragalino xaq uma lihin ,waana hab ay shirkadani dunida kula macaamisho ,taasna waxa ay u samaynayaan dantooda,waayo hadii ay Itopiya wayaan, waxa ay khasarayaan malayiin doolar.
Saamiga Itopiya la siinayaa,waxa uu ku xidhan yahay, hadba inta ay ganacsigeeda soo mariso Berbera,haddii Itopiya laga wayo in ay Berbera xidheedh la yeelato,khasab waxaa ah in aanay samiigaasi helayn,inaguna aynu khasaarayno.
Haddii aan qoraalkayga soo ururiyo,waxa ay ila tahay baryahan waxaa inagu badan mucaradad aan cilmi ku fadhiyin oo waxkasta la iska mucaarado ,xaataa haddii Janada laguu wado ,waxaa aad arkaysa qaar ka hadlaaya oo leh janada dooni mayno.
Waxa aan ku talin lahaa tartan iyo dadaal ayaa laga rabaa Somaliland in ay la tartanto Dekeda Jabuuti,taasi oo inta badan haysata ganacsiga Itopiya,dadkiina mucaaradka ku ahaw saxibayaan caqliga intan ka balaadhiya,sheekada Itopiyana waji kii wakhtiyadii hore lagu eegi jiray ku eega,xaalku waa is badalay.
Dekeda Berbera waa Dukaan loo samaystay in ay wax ka iibsadaan dalwaynaha Itopiya,hadii uu Dukaankaasi waayo cid wax ka iibsata, aakhirka waa uu khasaarayaa ,dayna waa lagu yeelanayaa,waana ganacsi Siyasasadi ay hogaaminayso yay idinla fududaan,waxaa dhici karta in dalalkale oo inaga fog iyana saamiyo la siiyo si ay wax ugala soo degaan Berbera.